I-Endesa imalunga nokuzichaza | Ezezimali
Elinye lamaxabiso avusa ulindelo lwangoku phakathi kwabatyali mali abancinci naphakathi ngokuchanekileyo yinkampani yombane i-Endesa. Ukwixesha elibaluleke kakhulu lokuqalisa kwakhona nditsho okanye ngokuchaseneyo, yenza izilungiso kumaxabiso abo ngamandla amakhulu. Ngale ndlela, kulindeleke ukuba kungabikho mfuneko yokulinda ixesha elide ukufumana ukuba ithambo lexesha elifutshane liyakuba yintoni. Ngenjongo ephambili yokuba abatyali mali abancinci nabaphakathi baqhubeke nesicwangciso sotyalo mali.
Okwangoku, amaxabiso e-Endesa ahamba ngebhanti esecaleni ehamba ukusuka kwi-21,70 ukuya kwi-23 euro. Kuya kufuneka idlule nakweyiphi na le mida yolwabiwo ukuze ibe yinyani okanye inyuswe kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Ngayiphi na imeko, isigqibo esenziwe yiBhanki eNkulu yaseYurophu sokunganyusi amazinga emali kude kube sisiqingatha sokuqala se-2020 esonyuse amaxabiso abo. Ukuya kwinqanaba lokuba iyithathile yaya kuma-euro angama-23,15 ngesabelo ngasinye kwaye isondele kakhulu kwinani lokunyuka kwamahhala. Eyona nto iluncedo kakhulu kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi kuba ayinakuxhathisa ngaphambili.
Ngelixa eyona nto ingathandekiyo ilele kwinto yokuba ngu Ixabiso elingaphezulu kwaye ayisenandlela inyukayo okanye ubuncinci inqabile. Oku kunokumisela ukuba uxinzelelo lokuthengisa lubekelwe abathengi kwixesha elifutshane neliphakathi. Ngeyona njongo iphambili yokulungelelanisa umthetho wonikezelo kunye nebango. Ngale ndlela, akukho khetho ngaphandle kokuqaphela kakhulu imisebenzi eqhutywa kule nkampani ibalulekileyo yombane. Kungenxa yokuba akukho mathandabuzo okuba sinokuhlala sibambekile ixesha elide kwizikhundla zabo.
1 Endesa: imeko yokwenyani
2 Ixabiso elijoliswe kwii-euro ezingama-20
Endesa: imeko yokwenyani
Imeko yale nkampani yombane isezandleni zenkunzi yase-Italiya inzima kakhulu. Kungenxa yokuba nangona imeko yayo okanye ubuchwephesha busimema ukuba sivule izikhundla ukusukela ngoku, ayisiyonyani leyo inyuke kakhulu kwiinyanga ezidlulileyo kwinto ethathwa njengokugula kwindawo ephakamileyo. Kwaye njengoko bonke abatyali mali abancinci nabaphakathi besazi, akukho nto kwimarike yemasheya enyukayo okanye esezantsi ngonaphakade, kungaphantsi kwezokhuseleko ezibhalwe kwiimarike zezabelo. Ukongeza, nangaliphi na ixesha imeko inokutshintsha okanye yintoni enye, imeko yayo. Ukusuka kwi-bullish ukuya kwi-bearish ngaphandle kokuyiqonda kwaye ngenxa yesi sizathu kufuneka sisebenze ngononophelo olukhulu kwizigqibo esiza kuzenza ukusukela ngalo mzuzu ukuya phambili.
Ngelixa kwelinye icala, asinakulibala ukuba xa amaxabiso enzala enyuka, iimpendulo zale nkampani yombane ziya kuba zezi intloko phantsi. Mhlawumbi ngamandla afanayo athe aphakama ngawo kwiinyanga ezidlulileyo. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Kwinto ehambelana nesicwangciso esichanekileyo sokutyala imali kwaye ngaphezu kwako konke kulungelelaniswe nenyani. Kwelinye icala, ayingawo onke amaxesha aya kuthi alunge kakhulu kwimidla yeli candelo libalulekileyo lezabelo zaseSpain.
Ixabiso elijoliswe kwii-euro ezingama-20
Kufuneka iqatshelwe ukuba ixabiso ekujolise kulo i-Endesa lingaphantsi kwezo zisetwe ngoku. Uhlalutyo olwahlukileyo luqwalasele ixabiso elichazwe phakathi kwe-20 kunye ne-21 ye-euro ngesabelo ngasinye. Ngokufanelekileyo, phantse ibe ngama-20% ngaphezulu kolu qikelelo ngabalamli bezemali. Ngale ndlela, ukhathalelo olukhethekileyo kufuneka lwenziwe ukwenza naluphi na uhlobo lwentengiselwano kwezokhuseleko. Ngenxa yeziphumo ezibi ezinokuba nazo ekusebenzeni kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Le yinyani ekufuneka ithathelwe ingqalelo kule mizuzu ngqo.
Kwelinye icala, kubaluleke kakhulu ukuvavanya inyani yokuba ukhuseleko olufana nolu luzinzileyo kunabanye kwaye kule ndlela lunokunika abatyali-mali uxolo olukhulu lwengqondo. Ngokukodwa kwiimeko ezigwenxa zeemarike zokulingana zikazwelonke nangaphaya kwemida yethu. Kule meko, kulapho inkampani yombane yaseSpain ne-Italiya inokudlala indima efanelekileyo ukuze babe nakho Yenza imali kwimali oyigcinileyo kwimisebenzi yexesha elifutshane.
Ukuya kwinqanaba lokuba ngokwesiko kuthathelwe ingqalelo njengenye ye amaxabiso okusabela ngokugqwesa. Njengabalingane bakhe kwicandelo lezamandla. Into ngokungathandabuzekiyo enokuphindwa ukuba le miqathango iyathotyelwa kwizabelo zamazwe nezizwe. Nangona mhlawumbi ngaphandle kokuqina kukonyuka okuye kwenzeka kude kube ziinyanga ezimbalwa ezidlulileyo.
Ukuhamba kwemali kwikota yokuqala ye-2019 kwakuyi-335 yezigidi ze-euro, oko kukuthi, amaxesha angama-13 aphezulu kunelo xesha linye le-2018. Oku kubangelwe kukunyuka kwe-EBITDA kunye nokuphuculwa kwemali yokusebenza (-39%). Ngelixa kwelinye icala, ityala elipheleleyo lemali lenyuke nge-1.127 yezigidi zeerandi xa kuthelekiswa noDisemba 31, 2018 njengesiphumo sezinto ezininzi, phakathi kwazo ifuthe lokungena kokusebenza kwale IFRS 16 sele ikhankanyiwe, oko kuthetha ukuba Ukubhalisa ukwanda kwe-186 yezigidi ze-euro kwityala elipheleleyo ngoDisemba 31, 2018.
Apho kuboniswa khona ukuba utyalomali lwenziwe kuphuhliso lweepaki ezintsha ezinokuhlaziywa, kunye nentlawulo yesahlulo sethutyana esihlawulwe kwiziphumo ze-2018, ezifikelela kwi-741 yezigidi zeerandi, ezenziwe nge-2 kaJanuwari. Ezi ziziphumo ezingakhange ziboniswe ngokugqithileyo kwikoteyishini yamaxabiso kuba iziphumo zekota yesibini neyesithathu yonyaka ziya kubaluleka kakhulu. Baza kunika isikhokelo esithe kratya sesicwangciso esenziwe yile nkampani yamandla, ngandlela ithile okanye enye enokuthi isebenze ukuze abatyali mali abancinci nabaphakathi benze izigqibo zabo zotyalo-mali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » I-Endesa imalunga nokuzichaza